Herisetra amin’ny fampielezan-kevitra: nakarin’ny Ceni fitsarana ny fitorian’ireo kandidà | NewsMada
Herisetra amin’ny fampielezan-kevitra: nakarin’ny Ceni fitsarana ny fitorian’ireo kandidà
Par Taratra sur 03/11/2018
“Anankiroa ny fitoriana tonga eto amin’ny Ceni”, hoy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Alarobia, omaly, momba ny fitorian’ireo kandidà noho ny fisian’ny herisetra nihatra tamin’ireo mpomba azy avy tao anatin’ny fampielezan-kevitra.
Fitoriana voalohany amin’izany ny nataon’ny kandidà lah. 13, Rajoelina Andry, momba ny herisetra nihatra tamin’ny mpanohana azy nandritra ny fampielezan-kevitra. Tonga teny amin’ny Ceni ny 27 oktobra ny fitoriana.
Tsy mifankaiza amin’izany ny fitoriana faharoa, avy amin’ny kandidà lah. 25, Ravalomanana Marc. Mbola momba ny herisetra nahazo ny mpomba azy tao anatina fampielezan-kevitra ihany koa ny fototry ny fitoriana, izay tonga teny amin’ny Ceni ny 29 oktobra lasa teo.
Mandray fitoriana ihany no ataon’ny Ceni fa ny fitsarana mahefa ny amin’izany no mandray an-tanana ny fanadihadiana sy ny fitsarana ny raharaha. Raha tsiahivina, nisy ny fikasihan-tanana ny mpomba ny kandidà. Teo koa ny fandratrana olona, niafara tamin’ny famoizana aina aza.
Mila fampiharana amin’izay ny lalàna
Tena hisy amin’izay ve ny fampiharan-dalàna, indrindra ny fanasaziana, amin’izay mandika lalàna amin’ny raharaham-pifidianana? Mba tsy ho vitavita sy tsy hitahita ho azy toy izay nisy sy niainana hatramin’izay… Amin’izay, tena itokisana tokoa ny fikarakarana sy fikirakirana ny fifidianana: hoeken’ny rehetra. Anisan’ny miantoka ny tsy hisian’ny korontana sy ny fanoherana ny voka-pifidianana izay?
Fondation Mérieux: hitsangana ny ozinina ho an’ny fanampin-tsakafo 17/06/2021
Fanefitry ny valanaretina – Toamasina: nanao vaksiny ny mpiasan’ny seranana-tsambo 17/06/2021
Firenena mikambana: nanaiky nanao sonia miady amin’ny kolikoly i Madagasikara 17/06/2021
Jirama: nampahafantarina ny fikambanan’ny mpanjifa ny tetikasa rehetra 17/06/2021
Cisco Antananarivo Renivohitra: 30 325 ny isan’ny mpiadina amin’ny CEPE 17/06/2021